Maxay Tahay Tallaabada Ruushka Uu Qaadi Rabo Ee Reer Yurub Ay Ka Cabsanayaan?
Thursday June 23, 2022 - 07:52:06 in News by Hadhwanaag News
"Marnaba meesha ka saari mayno in Ruushku uu sii wadayo"
Madaxa hay'adda tamarta adduunka ayaa ka digay suurtagalnimada in xilliyada qaboobaha Ruushka laga yaabo in uu joojiyo gaaska uu siiyo waddamada reer Yurub.
Madaxa hay'adda tamarta adduunka, Fatih Birol, waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in dhimistii dhawaan Ruushku uu ku sameeyay gaaska uu u dhaafin jiray Yurub ay tahay "istaraatijiyad". Hoos u dhacaasi ayaa sababay in waddamada Yurub ay ku adkaato in ay buuxiyaan keydadka gaaskooga, waxa ayna sidoo kale muujineysaa sida aysan ugu maarmin gaaska Ruushka.
"Marnaba meesha ka saari mayno in Ruushku uu sii wadayo in uu marmarsiiyo u raadiyo hoos u dhacaya gaaska uu u dhoofiyo qaaradda Yurub iyo xitaa in uu jaro gabi ahaanba," ayuu yiri Birol oo la hadlay BBC-da.
Usbuucii la soo dhaafay ayaa gaaska dabiiciga ahi ee soo maraya dhuumaha Nord Stream 1 ee ka midka ah dhuumaha gaaska Ruushka kuwa ugu muhiimsan ee taga qaaradda Yurub, waxaana lagu qiyaasay 40% ka mid ah gaaskii la soo marsiin jiray dhuumahaasi. Inta badan khubarada ayaa ka shakisan sharaxaadda Ruushka ee ah in arrintani ay ka dhalatay "arrimo farsamo".
Bishii la soo dhaafay ayaa waddamada reer Yurub waxay isku raaceen in ay isku dayaan in ay ka gaashaantaan isbed-beddelka qiimaha gaaska, iyaga oo buuxsanaya keydkooga gaaska. Waxay si wadajir ah u go'ansadeen in meesha lagu gaaro bisha Nofeembar ay keydsadaan ugu yaraan 80% gaaska ay u baahan yihiin, waxaana xogtii ugu dambeysay ay sheegeysaa in ay haatan keydsadeen ku dhawaad 55% gaaska ay u baahan yihiin.